होमपेज, गृह सुरक्षा
हाल,90 भन्दा बढी इन्ट्रान्सहरू सुरक्षा प्रणालीसँग सुसज्जित छन्, जस्तै ढोका फोन। यो उपकरण विभिन्न विविधताहरूमा अवस्थित छ, तर तिनीहरू सबैलाई सांस्कृतिक रूपमा "होक गरिएको" हुन सक्छ। त्यसैले तपाइँ कसरी कुञ्जी बिना ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ?
यसले घुमाउँछ कि हाम्रो शहरहरूमा इन्टरकम प्रणाली स्थापना सरल छ, एक गुणस्तर तालिकाको रूपमा। र यदि अझ बढी भन्नु हुन्छ भने, तिनीहरू प्राविधिक दृष्टिकोणबाट बिल्कुल तार्किक छन्। यो कुनै पनि इन्टरनेट सर्च इन्जिनमा भर्खरै एक वाक्यांश टाइप गरेर न्याय गर्न सकिन्छ: "कुञ्जी बिना कुनै कुञ्जी फोन खोल्न।" हामी देख्न सक्छौं कि हामी दयालु यस प्रश्नको लागी लगभग एक लाख उत्तर प्रदान गर्दछौं, किनकि यसको अनुभव हो कि हाम्रो देशको कम्तिमा आधा आबादी या त पक्कै वा आत्मामा "इन्जिनियर" हो।
तपाईलाई थाहा छ, अन्तर्क्रिया कन्फिगर गर्नको लागि तपाईलाई यसको प्रोग्रामिङ मोडको पहुँच चाहिन्छ। यो सामान्यतया यन्त्र कीबोर्डमा एक विशिष्ट पासवर्ड टाइप गरेर गरिन्छ। स्थापनाकर्ताले मोडमा प्रवेश गरे पछि, उनीहरूले अन्तरक्रोमको प्रवेश द्वार खोल्न नसक्ने मौका पाउँदछ, तर ढोका खोल्न बिना प्रणालीको सबै सेटिङहरू परिवर्तन गर्न पनि। यो अन्तर्वार्ता प्रणालीको यो भाग हो, जुन निर्माताहरूले समयको विशेष ध्यान दिएका छन्, लङ्गडा छ, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, दुवै खुट्टामा। गलती या तो निर्माता को त्रुटि हो, या इंस्टॉलर को आलस्यता र अंतर्निहित। तर तथ्य बनी रहन्छ - गोपनीय कोड जसले तपाईंलाई अन्तर्क्रियाबाट कुञ्जी बिना प्रवेश प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ, लामो समयसम्म गोपनीय रह्यो।
तल, हामी कसरी कुञ्जी को सबै भन्दा प्रसिद्ध प्रकार को ढोका बिना दरवाजा फोन सिस्टम कसरि खोल सकते हो। त्यसोभए, परीक्षण र त्रुटि विधि को व्यावहारिक अनुप्रयोग पछि, एक सुरक्षित तरिकाले भन्न सक्छ: "खोलो, तिल!"
VIZIT: कुञ्जी बिना कुञ्जीफोन कसरी खोल्न
यी अन्तर्क्रियाहरू बिना कुञ्जी खोल्न सबै भन्दा गाह्रो मानिन्छ, किनभने तिनीहरूलाई कोडहरू अविवाहित किसिम फरक हुन्छन्। यदि स्थापनाकर्ताले उपकरणको मानक सेटिङ्हरू परिवर्तन गरेन भने, त्यसपछि "12 # 345" वा "* # 4230" प्रविष्टि गर्न ढोका खोल्नु पर्छ। हालैमा स्थापित VIZIT कोड "67 # 890" वा "* # 423" संग खोल्न सकिन्छ। वैसे, यस अन्तर्क्रिया को धेरै मोडेलहरुमा अक्सर "प्रतीक" र "लाश" को प्रतीक नहीं हुन्छन् - उनको कार्य को बदलन, क्रमशः, "कु" र "सी" कुञ्जी।
यदि इन्टरकॉम स्थापना गर्दा स्थापनाकर्ताले आफ्नो पूर्वनिर्धारित सेटिङ परिवर्तन गरेको छ भने, तपाइँलाई पहिलो सेवा मेनुमा जानुहोस् ("#999"), दुई छोटो पछाडि पर्खनुहोस् र त्यसपछि पूर्वनिर्धारित कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् ("1234")। अब तपाईलाई छोटो एकल स्केच सुन्नु पर्छ। अब केही थप जटिल कार्यहरू गरौं। "2" डायल गर्नुहोस्, रोक्नुहोस्, "ग्रिड", रोक्नुहोस्, "3535" (अन्तिम कोड कुञ्जी प्रयोग नगरिकन ढोका खोल्ने आदेश हो)।
साइफल: कसरी कुञ्जी बिना ढोका खोल्ने
यदि संख्यामा रहेका अपार्टमेन्टहरू दायाँ प्रवेशमा उपस्थित छन्, जुन 100 को एक धेरै हो (जुन, 100, 200, आदि), त्यसपछि एक संयोजन प्रविष्टि गरिएको छ: "कल, कोड 1, कल, कोड 2"। कोड 1 एक अपार्टमेन्ट नम्बर हो जुन 100 को एकाधिक छ, र कोड2"7272", "2323" वा "7273" हो।
साइफल मोडेलका लागि "M" को साथमा संयोजनको प्रयास गर्नुहोस्: "कल, 41" वा "कल, 1410"। अर्को ढोका "07054" को सरल परिचय संग खोल्न सकिन्छ।
कसरी एक इन्टरनेट Eltis कुञ्जी बिना खोल्न खोल्नुहोस्
Eltis धेरै सजिलो खुल्ला छ। "स्वच्छ" हैकिंगका लागि, संयोजन डायल गर्नुहोस्: "कल, 100, कल, 7273" वा "कल, 100, कल, 2323"। सबैले काम गर्नु पर्छ।
हामी अन्तरक्रिया प्रणाली METAKOM खोल्छौं
हामी संयोजन डायल गर्नुहोस्: "कल, यस प्रवेशमा पहिलो अपार्टमेन्टको संख्या, कल।" जब प्रदर्शन "COD" देखाउँछ, "5702" प्रविष्ट गर्नुहोस्। यदि यसले काम गर्दैन, तपाईं संयोजन टाइप गरेर अर्को तरिकामा जान सक्नुहुन्छ: "65535, कल, 1234, कल, 8, कल, 6, कल, 4568"।
Rainmann: कुञ्जी बिना कुञ्जीफोन कसरी खोल्न
संख्यात्मक कीप्याडमा "कुञ्जी थिच्नुहोस्" र "987654" प्रविष्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईंको कार्यको प्रतिक्रिया एक डबल स्केच थियो भने, त्यसपछि "123456" प्रविष्ट गर्नुहोस्। डिस्प्ले "P" देखाउनुपर्दछ, जसको अर्थ तपाईं सेवा मेनुमा हुनुहुन्छ। ढोका खोल्नको लागी, "8" थिच्नुहोस्।
एक कुञ्जी बिना एक अन्तर्वार्ता संग दरवाजा खोल्दा, एक तलको लागि तत्काल आवश्यकता र आपसी प्रयोजन संग आपराधिक रूपमा दण्डित ह्याकिंग बीच भेद गर्नु पर्छ। यसकारण, प्राध्यापक हुनुहोस् र बुद्धिमानी यो ज्ञान प्रयोग गर्नुहोस्।
एटमाइजर - यो के हो? Atomizers बारे समीक्षाहरू
ताप म्याट: प्रकार र समीक्षाहरू
लेच इलेक्ट्रोनिकल: स्थापना, तारिङ रेखाचित्र, अपरेसन सिद्धान्त
स्मार्टफोन Prestigio: सिंहावलोकन, विनिर्देशों, समीक्षा
मानिसहरू लागि स्पेनिश नाम - एक असामान्य सांस्कृतिक सम्पदाको
कर्नेलससुमाकर गरेको अवस्था आज। राज्य दौडने माइकल कर्नेलससुमाकर के हो?
के यो मस्तिष्कमा प्रभाव पार्न सम्भव छ? व्यवहार र जीन
रणनीतिक महत्व कागजात: एक सन्दर्भ 2-पिट ऋण लागि